Izizathu zokufaka noma zokuthuthukela ku-Ubuntu 18.04 | Kusuka kuLinux
Izizathu zokufaka noma zokuthuthukela ku-Ubuntu 18.04
Ngemuva kwayo yonke injabulo ukuthi lokhu kwethulwa okusha kokusatshalaliswa kwe-Canonical kubange phakathi kwabasebenzisi beLinux Awusazi ukuthi uzimisele ukufaka Ubuntu 18.04 LTS noma uma uzovuselela inguqulo yangaphambilini yalena, nazi ezinye izizathu zokuthi kungani kufanele uyicabangele.
Ngaphambi kokuba ngiqale, kufanele ngikusho lokho okushiwo lapha kuphela ukuhlanganiswa okususelwa kokuhlangenwe nakho okwabiwe nokuthatha komuntu siqu okuhle nokubi kwe-Ubuntu okwenze iminyaka eminingana.
1 Izizathu zokuba no-Ubuntu 18.04 kukhompyutha yakho.
1.1 Ukusekela kuze kube ngu-2023
1.2 I-Xorg iphinde isetshenziswe
1.3 Iba nezibuyekezo zakamuva zokuphepha
1.4 Kungani uthuthela kusuka ku-XP
1.5 I-Snap isivele ifakiwe ngokwendabuko.
1.6 Ukuxhaswa kwe-Emoji kungeziwe
1.7 I-Bloatware iyasuswa
Izizathu zokuba no-Ubuntu 18.04 kukhompyutha yakho.
Kule nguqulo entsha ye-Ubuntu, kwenziwe izinguquko eziningana, kusuka endleleni yokufaka kuya ekusebenziseni kwayo ukugwema izingqinamba ohlelweni.
Ukusekela kuze kube ngu-2023
Njengoba iningi lenu lizokwazi noma ngabe anazi, abafana be-canonical bakhipha uhlobo lohlelo lwabo ngokuxhaswa okwengeziwe (i-LTS) njalo eminyakeni emibili Ngakho-ke lokhu kukhishwa kuzoba nokusekelwa kuze kube unyaka ka-2023, okuthi, ngokungafani nezinguqulo ze-17.xx, okufaneleke kakhulu ngokuba nohlelo olubuyekeziwe okungenani eminye iminyaka engu-5.
I-Xorg iphinde isetshenziswe
Uma ungumsebenzisi we-Ubuntu 17.10 uzokwazi lokho ICanonical yenze isinqumo ngokuxhamazela kakhulu yokubeka iWayland njengeseva eyinhloko yemidwebo, okuthile okwamlahlekisela ngokugxekwa okuningi futhi ikakhulukazi izinkinga zokuzinza ikakhulukazi ngezicelo ezahlukahlukene ezazincike kuXorg ngokusebenza kwazo.
Kuyiqiniso ukuthi iWayland ithembisa okuningi, kepha kusengakavuthwa ukuthi ikhishelwe ekusatshalalisweni ngabasebenzisi abafuna kakhulu, yingakho kule nguqulo entsha ye-Ubuntu Xorg ikude njengeseva enkulu yezithombe.
Iba nezibuyekezo zakamuva zokuphepha
Bekuhlale kutuswa ukuba nohlelo olusha hhayi ukujabulela kuphela imisebenzi emisha noma izengezo, kepha futhi ukugwema ukwehluleka okungenzeka noma ukuyekethisa imininingwane yethu.
Kuyacaca ukuthi alukho uhlelo oluphephe nge-100% ngoba izindlela ezintsha zokugenca zitholakala nsuku zonke futhi zibukeka, ngahlabeka umxhwele lapho ngizwa ukuthi imininingwane ingantshontshwa ekufakweni kwakho kagesi noma ngabe ikhompyutha yakho ingaxhunyiwe kwikhebula le-inthanethi.
Kule nguqulo ye-Ubuntu usunayo i-Kernel enezixazululo ze-Meltdown ne-Specter, babanga umsindo omkhulu ngasekupheleni konyaka odlule.
Kungani uthuthela kusuka ku-XP
Uma ungumsebenzisi we-Windows XP futhi umelana noshintsho noma ukufuduka okuphelele kuye Windows 10, Ubuntu kungenye indlela enhle kakhulu Kakhulu ngoba kungukusatshalaliswa kwe-Linux kubungani kubasebenzisi abasha ngaphezu kokuba enembile futhi i-XP ingene emlandweni wekhompyutha njengoba isivele iyisistimu engasasebenzi.
I-Snap isivele ifakiwe ngokwendabuko.
Ngemuva kwamazwana amaningi asemoyeni nezinkulumo eziningana ngale ndaba, kule nguqulo ye Ubuntu 18.04 ekugcineni ifaka isitolo sohlelo lokusebenza ngefomethi ye-snap "Isitolo se-Snapcraft" nayo isinikeza ngezinhlobonhlobo zesoftware futhi ngaphezu kwakho konke ukuba nezinguqulo zakamuva zezinhlelo zethu esizithandayo ngokushesha okukhulu.
Kahle imvamisa ukuba nezinguqulo zakamuva zezinhlelo ezinqolobaneni ezisemthethweni ze-Ubuntu kwadingeka zidlule izinsuku ezimbalwa ngemuva kokukhululwa kwazo ngokusemthethweni.
Ukuxhaswa kwe-Emoji kungeziwe
Manje sinokusekelwa kwendabuko kwe-Emoji ohlelweni Ukuwafaka, kufanele sichofoze kwesokudla kunkambu yombhalo bese ukhetha inketho yemenyu ethi 'faka i-emoji' lokhu kuzovula iphalethi lesikhethi le-emoji elikhethiwe futhi elizulazulayo.
Kuyacaca ukuthi izinqumo eziningi zeCanonical zokwenza imisebenzi emisha zimbizele ukugxekwa okuningi kanti esinye esamlahlekisela ukulahleka kwabasebenzisi ngaphandle kokufuduka eGnome kuya e-Unity kwakuwukusebenzisa isithonjana se-Amazon futhi imiphumela yalokhu izovela. lapho usebenzisa i-Unity Finder.
Kule nguqulo entsha ye-Ubuntu 18.04 inketho yokufaka encane isetshenziswe kufaki lapho kuphela i-Firefox nezinketho eziyisisekelo zohlelo ezifakiwe nalokhu sikhohlwa yonke leyo software ebeka izindawo ze-Canonical futhi sibheka isithonjana se-Amazon ngokungadingekile phakathi kwabo.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-GNU / Linux » Izizathu zokufaka noma zokuthuthukela ku-Ubuntu 18.04
UCristobal Maestre Vaz kusho
Kuyathakazelisa kakhulu ngokufakwa okuncane kwabantu abafuna Ubuntu babo kube ngokwezifiso ngokwengeziwe
Phendula uCristobal Maestre Vaz
Lalingekho ithuba. Faka le nguqulo ye-ubuntu nama-flavour alula (i-lubuntu ne-xubuntu) futhi ukubambezeleka kokuqala bekungunaphakade. Imizuzu engaphezu kwengu-5 yokulinda kusuka lapho incwadi yamanothi ivulwa kuze kuvele ideskithophu.
Ngigcine ngokubuyela kwiLinux Mint yami ethembekile (18.3) engingakaze ngibe nenkinga nayo (amandla ngomzuzu owodwa). Ngemuva kwalokho faka inguqulo yakamuva yeManjaro ngasikhathi sinye futhi izoqala futhi kumzuzu ongu-1.
Uma kukhona owaziyo ukuthi kungani ukubambezeleka kokuqala ubuntu kungabonga kakhulu (bengifunda ukuthi kungaba yinkinga ngokuhlukaniswa kokushintshaniswa, ngakho-ke ngazama ukwenza ukufakwa okuhlanzekile ngaphandle kokushintshana futhi ukubambezeleka kokuqalisa kuyaqhubeka).
Okwamanje angicabangi ukuthi Ubuntu 18.04 inconyelwa ukuyifaka ... kungcono kudlule isikhathi eside ngoba lokho kuseBETA. Okungenani izinyanga ezine
I-Atari VCS ingathengwa kuqala ngoMeyi 30
Thuthukela ku-Ubuntu 18.04 ngaphandle kokufaka kabusha